မောင်လေး ဂျူနီယာချစ်ကောင်းရဲ့ မွေးနေ့မှာ အစ်မကောင်းပီသလှတဲ့ စကားလေးနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ် - Cele Gabar
မောင်လေး ဂျူနီယာချစ်ကောင်းရဲ့ မွေးနေ့မှာ အစ်မကောင်းပီသလှတဲ့ စကားလေးနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်
ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ့်ချစ်ကတော့ အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို မိသားစုအတွက်လည်း ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အပြင် မောင်လေးဖြစ်သူအတွက်လည်း အမကောင်းတစ်ယောက်ပီသလှသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မောင်လေးကိုလည်း အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လက်တွဲခေါ်ပြီး တကယ်ကို အမကောင်းပီသလှသူပါ။
ဒီနေ့မှာလည်းအိမ့်ချစ်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မောင်လေးဖြစ်သူ ဂျူနီယာချစ်ကောင်းအတွက် အမကောင်းပီသလှတဲ့ စကားလေးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ကတော့ “Happy Birthday Junior. Junior Chit Kaung မွေးနေ့မှ၍ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေ။ ဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ထပ်တည်းကျပါစေ။ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါစေ
I always got your back dude ..!! Keep going ..!!” ဆိုပြီး မောင်လေးအတွက် အမြဲတမ်းအမကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ Support ပေးနေမှာဖြစ်ကြောင်း မွေးနေဆုတောင်းလေးနဲ့အတူရေးသားထားခဲ့ပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ့်ချစ်လို အမမျိုးကတော့ တကယ်ကို အမကောင်းတစ်ယောက်ပီသလွန်းတဲ့ ရှာမှရှား အမမျိုးပါပဲနော်။
ေမာင္ေလး ဂ်ဴနီယာခ်စ္ေကာင္းရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ အစ္မေကာင္းပီသလွတဲ့ စကားေလးနဲ႔ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ အိမ့္ခ်စ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ အိမ့္ခ်စ္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သလို မိသားစုအတြက္လည္း ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳႏိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ေမာင္ေလးျဖစ္သူအတြက္လည္း အမေကာင္းတစ္ေယာက္ပီသလွသူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ေလးကိုလည္း ေအာင္ျမင္တဲ့အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လက္တြဲေခၚၿပီး တကယ္ကို အမေကာင္းပီသလွသူပါ။
ဒီေန႔မွာလည္းအိမ့္ခ်စ္က သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ေမာင္ေလးျဖစ္သူ ဂ်ဴနီယာခ်စ္ေကာင္းအတြက္ အမေကာင္းပီသလွတဲ့ စကားေလးနဲ႔အတူ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အိမ့္ခ်စ္ကေတာ့ “Happy Birthday Junior. Junior Chit Kaung ေမြးေန႔မွ၍ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာပါေစ။ ဆႏၵနဲ႔ဘဝတစ္ထပ္တည္းက်ပါေစ။ ေအာင္ျမင္တဲ့အႏုပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါေစ
I always got your back dude ..!! Keep going ..!!” ဆိုျပီး ေမာင္ေလးအတြက္ အျမဲတမ္းအမေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ Support ေပးေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးေနဆုေတာင္းေလးနဲ႔အတူေရးသားထားခဲ့ပါေသးတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေရ အိမ့္ခ်စ္လို အမမ်ိဳးကေတာ့ တကယ္ကို အမေကာင္းတစ္ေယာက္ပီသလြန္းတဲ့ ရွာမွရွား အမမ်ိဳးပါပဲေနာ္။
Previous post အစ်မဖြစ်သူ အေးသောင်းရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း
Next post ” ကမ်းခြေမှာ ပိုစ့်အမျိူးမျိုးပေးကာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကိုတင်လာခဲ့တဲ့ ရွှေမှုံရတီ”